Njem ụlọ ọrụ - Shenzhen Chinaok Electric Appliances Co., Ltd.
Usoro nke Njikwa Ogo
Eleghị anya ịchọrọ ịma ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na -eme atụmatụ nke ọma maka iwu ndị ahịa, site n'ịtụle ịzụrụ na imepụta oge, ndị ọrụ, ikike dịnụ, wdg, ma nwee ụzọ ijikwa mmepụta n'oge oge kacha elu ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na -edobe ndekọ dị mma. -nnyefe oge. Ndị otu mmepụta anyị nwere atụmatụ kwa izu dịka arịrịọ ahịa na ike imeputa, ihe karịrị 90% OTD nwetara.
Ụlọ ọrụ na-eduzi njikwa usoro site na echiche dabere n'ihe ize ndụ, dịka ọmụmaatụ, njikwa njikwa nrụpụta, mee njikwa njikwa dị mkpa wdg wdg.
Ụlọ ọrụ ahụ haziri ihe kwesịrị ekwesị, akụrụngwa, nlele inline (n'etiti nkeji 2), nlele 100% zuru oke nke nlele anya na nnwale arụmọrụ dị ka atụmatụ si dị. Agbanyeghị, 1, enweghị nhazi nhazi maka ụfọdụ usoro ntụgharị ihu n'ahịrị SMT; 2, enweghị nnwale nnwale ọkpụrụkpụ solder na -adabere na nnwale nnwale ngwaahịa; 3, maka njikọta ahịrị, enweghị ihe akaebe na -egosi na enwere ike iduzi IPQC n'oge.
Ụlọ ọrụ ahụ kọwara WI nrụpụta dị mkpa yana SOP nyocha, ihe nlele wdg wdg iji chịkwaa mwepụta ngwaahịa, mana ka ị na-ahụ, ekesaghị akwụkwọ WI ole na ole na mpaghara saịtị, dịka ndepụta oke torque wdg. nlele anya, nyocha CDF, nnwale ọrụ wdg.
QA kọwara ma mejupụta FQC SOP iji chịkwaa nyocha ngwaahịa ikpeazụ, gụnyere atụmatụ nlele na AQL, ihe nyocha na usoro, usoro ịjụ ndị jụrụ. Ihe nyocha FQC gụnyere nlele anya, nnwale arụmọrụ eletriki, nnwale ịka nká, ule ike, ule nha wdg.
Tupu ebuga ngwa ahịa ndị ahịa, anyị ga -eduzi nyocha 100% na ọkọlọtọ nyocha AQL Sampling.